Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » IATA: Bilie na ebubo ụgbọ elu ndị Spen ga-emebi mgbake akụ na ụba, mebie ọrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
AENA na-atụ aro ịbawanye ebubo onye ọrụ na ọdụ ụgbọ elu 46 ọ na-arụ ọrụ na Spain
Ihe ndị njem chọrọ 76% gbadara na 2020 ma atụghị anya na ọ ga-agbake ruo mgbe 2024
Onu ogugu ndi nwere uzo no na Spain dara site na 1,800 (2019) rue 234 (2020)
Ihe kariri oru 1.1 nke ndi Spanish alafuola ma obu tinye ya n’ihe egwu ma ihe kariri EUR 60 ijeri GDP efuola
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) dọrọ aka ná ntị na atụmatụ nke AENA ịbawanye ebubo ndị ọrụ na ọdụ ụgbọ elu 46 ọ na-arụ ọrụ na Spain nwere ike imebi akụ na ụba na ọrụ Spain na COVID-19.
Nkwupụta ndị enyere DGAC maka nnabata gụnyere arịrịọ iji bulie ebubo site na 5.5% karịa afọ ise. Ha ga-emepe ụzọ maka AENA iji nwetaghachi ego ha furu efu n'ihi nsogbu COVID-19, maka ọrụ ndị anaghị arụ ọrụ, ma ọ bụ nke ụgbọ elu enweghị ike ịnweta.
“Industrylọ ọrụ ụgbọelu niile nọ na nsogbu. Onye ọ bụla kwesịrị belata ụgwọ ma melite arụmọrụ iji mezie mmebi ego nke COVID-19. Ebe enyochachara ọnọdụ AENA, ụgbọ elu kwenyere na AENA nwere ike belata ebubo ya site na 4%. Ya mere na-enyefe inyefe ndị ahịa nsogbu nke mgbake ego na mmụba nke 5.5% abụghị ihe na-enweghị isi. DGAC kwesịrị ịjụ arịrịọ ahụ ozugbo wee kụziere AENA ka ya na ndị ụgbọ elu rụọ ọrụ na atụmatụ mgbake kwekọrịtara ọnụ, ”ka Willie Walsh, Director General IATA kwuru.
N'ihe na-efe efe, AENA kwupụtara ijeri EUR 2.59 nke nkewa site na oge 2017-19, ma nwee ọtụtụ nhọrọ iji kpuchie mfu ya. “AENA nwere ike ịkwụ ụgwọ ọghọm dị mkpirikpi n’enweghị nsogbu ọ bụla na-efu ndị ahịa ya. Ọ nwere ọkwa kredit dị mma iji nweta ego. Ndị nwe ya enweela ụgwọ ọrụ nke ọma ma ugbu a ha ga-esokwa ụfọdụ n'ime ihe mgbu ahụ. Ma, dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ niile, ọ ga-eleba anya na arụmọrụ arụmọrụ iji belata ụgwọ, nke enweghị oke ọnụ ala na Europe, "ka Walsh kwuru.
Ulo oru ugbo elu ikuku di nma-ya na ndi ozo lebara anya n'ibelata ugwo-ga adi oke nkpa na naghachi site na nsogbu ojoo nke COVID-19 nwere na mpaghara ndi njem na njem.
Onyinye njem na njem nleta na akụnụba Spain dara site na 12% ruo 4%.
“Iweghachite ngwa ngwa na njem na njem dị mkpa maka ọganiihu akụ na ụba nke Spain. Mana ọnụ ahịa dị elu ga-egbu oge ịghaghachi njem ma debe ọrụ n'ihe egwu. AENA kwesiri iburu n'uche ọdịmma ogologo oge nke ndị na-ekenye ya na mba ahụ. Ha abụọ na-arụ ọrụ nke ọma na akụrụngwa ọdụ ụgbọ elu na-efu ọnụ. Gọọmentị Spain na-arụsi ọrụ ike imeghe ókèala ma malitegharịa njem ụgbọelu. AENA kwesịrị itinye aka na mbọ ahụ, ọ bụghị ịkwalite ụzọ dị mkpirikpi ma nwee mmasị n'okporo ụzọ, "ka Walsh kwuru.
Ndị agha bọmbụ NYPD gbara gburugburu ụlọ UN gburugburu ...
Mmeju ahụike ụbụrụ: Ugbu a na-akwụsị Dementia? November 30, 2021
Otu n'ime uru kachasị dị ịrịba ama nke mgbakwunye ahụike ụbụrụ bụ na ha nwere ike inye aka melite ọrụ ọgụgụ isi na ebe nchekwa. Ụfọdụ ihe mgbakwunye ahụike ụbụrụ nwere ọtụtụ nri na-enyere ụbụrụ aka.
Ekwenyere Caldolor maka enyemaka mgbu mgbu tupu ịwa ahụ November 30, 2021
Enwere ike inye ihe mgbu na-abụghị narcotic ugbu a tupu awa ahụ ahụ iji mee ka ndị ọrịa teta na usoro ha na obere mgbu.
Ọgwụ mgbochi ọnụ na-enweta nkwado ugbu a November 30, 2021
China na Africa jikọrọ aka siri ike megide COVID-19 November 30, 2021
China ga-enye Afrịka ihe karịrị otu ijeri ọgwụ mgbochi COVID-19, rụọ ọrụ iri maka ibelata ịda ogbenye na ọrụ ugbo, ma na-eduzi mmemme ọzọ na Africa n'akụkụ dị iche iche, Onye isi ala Xi Jinping kwupụtara na Mọnde mgbe ọ na-ekwu okwu mmeghe nke nzukọ ahụ. site na njikọ vidiyo.
Oku ngwa ngwa WTN maka steeti OECD kwụọ ụgwọ ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Africa November 30, 2021
Kewapụrụ mba ndịda Africa nso nso a n'ihi ụdị Omicron achọtara ọhụrụ nke Coronavirus nwere ndị otu ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya Africa nwere nkụda mmụọ na iwe.
Mmiri dị n'ụwa: Ò si n'ájá oghere bịa n'ezie? November 30, 2021
Otu ndị ọkà mmụta sayensị mba ụwa nwere ike doziela isi ihe omimi banyere mmalite mmiri dị n'ụwa, mgbe ha kpughechara ihe akaebe ọhụrụ na-ekwenye ekwenye na-arụtụ aka na onye na-atụghị anya ya - Sun.
Ụgbọ elu: Nke kacha mma na nke kacha njọ November 30, 2021
Ọmụmụ na-enyocha ahụmịhe njem nke Bounce mere maka ihe ndị dị ka ọrụ, nri, nkasi obi, na ntụrụndụ, yana ọnụ ọgụgụ mkpesa na oke ikike ibu, na-ekpughe ihe kacha mma - na nke kachasị njọ - ụgbọ elu na USA na gburugburu ụwa.
NchNhr ụgbọ elu ọhụrụ nke Uganda: Ahịhịa? November 30, 2021
Na-esochi ihe dị egwu n'ụgbọ elu Uganda Airlines UR 446 na-aga Dubai na Fraịde, Nọvemba 26, 2021, ebe otu onye njem jidere na igwefoto ka ọ na-agbawa ụkpara n'akpa polythene, a manyere ndị ụgbọ elu ikwupụta ihe merenụ.
Japan dị nso ugbu a ma e wezụga ụmụ amaala November 30, 2021
Ka Africa na-ewe iwe na UK na Europe n'ozuzu yana United States maka imechi ókèala ha na mba ndịda Africa, Israel na ugbu a Japan na-aga n'ihu ma na-emechi mba ọzọ niile.
Ụgbọ elu ọhụrụ si Antigua gaa Barbados na Providenciales na interCaribbean Airways ugbu a November 30, 2021
Nwanyị nwanyị jiri onye isi ala mbụ dochie anya ya November 29, 2021
Qatar Airways na-akwado maka FIFA Arab Cup Qatar 2021 November 29, 2021
Dị ka nke a ga-abụ nke mbụ FIFA Arab Cup, Qatar ga-egosi ihe kacha mma nke pan-Arab football.
Minista Bartlett na-aga nzukọ ọgbakọ UNWTO dị mkpa November 29, 2021
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, hapụrụ agwaetiti ahụ ụnyaahụ ịga nnọkọ nke iri abụọ na anọ nke United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) General Assembly, nke ga-eme na Madrid, Spain, site na Nọvemba 30 ruo Disemba 3, 2021.
Ụgbọ elu Guyana ọhụrụ na Barbados na InterCaribbean November 29, 2021
InterCaribbean na-atụ anya ijikọ Georgetown na isi ihe Caribbean ndị ọzọ n'ọdịnihu dị nso iji wepụta na Caribbean ejikọrọ n'ezie na InterCaribbean Airways.
WestJet Group na-akpọsa onye isi oche na onye isi oge ọhụrụ November 29, 2021
Harry Taylor duuru okwu mmeghe US nke WestJet, kpara nkata ịzụrụ ụgbọ elu Boeing 787 Dreamliner na Boeing MAX, ma nyere aka n'ịre WestJet na Onex.